Home Wararka Boqor Buurmadow waa la kireystaa ee lama yeesho! Reer Muqdisho wey lunsan...
Boqor Buurmadow waa la kireystaa ee lama yeesho! Reer Muqdisho wey lunsan yihiin! (Faalo)
Siyaasiyiinta iyo oday dhaqameedka ku soo fashilma siyaasadda iyo dhaqanka ka jira Somaliland ayaa intooda badan Muqdisho u soo doonta shaqo iyo dhaqaale. Markii ay in mudo ah joogaana waxa ay dib ugu noqdaan Somaliland iyaga oo cafis weydiista dowlada iyo shacabka Somaliland.
Dhanka kale waxaa iyagana jira siyaasiyiin aanba u arkin qaranka Soomaaliyeed mid jira sidaasi darteedna waxa ay u jogaan Muqdisho howlo ganacsi oo ay ka dhex raadinayaan danahooda gaarka ah. Ma jirto wax qadiyad ah oo ay rumeysan yihiin balse waxa ay ku taagan yihiin dano aan ka baxsanaynkn tooda gaarka ah.
Hadaba madaxda Soomaaliya, gaar ahaan hogaanka hada ka jira dalka Soomaaliya, ee uu hogaamiyo Farmaajo ayaa rumeysan in waxgaradka reer Somaliland yihiin aalad lagu adeegto. Sida uu u sheegay saaxibadiisa waxa uu si ku meel gaar ah u kireystaa siyaasiyiinta iyo dhaqanka reer Somaliland ee aan qadiyada lahaynin.
Boqor Buurmadow oo ah nin lagu tilmaamo in uu ka mid yahay odayaasha ku qaraabta dhaqanka, loona istcimaalo adeegsiga danaha gaar ah ayaa asbcuucii hore lagu soo dhaweeyay magalaada Muqdisho, isaga oo sheeganaya in uu ka soo baxsaday Somaliland.
Maxamed Hebye oo kamida aqoonyahanada reer Somaliland kuna sugan Magaalada Hargeysa ayaa sheegay in shacabka iyo dhaqanka reer Muqdisho ay yihiin kuwa aanan taariikhda wax ka baran.
“adeer Boqorka, aniga ma doonayo in aan wax badan ka sheego, laakiin waxaa uu Muqdisho u tagay waa howl isaga u gaar ah.. waxa aanse kuu xaqiijinayaa in qolooyinka Muqdisho ay arki doonaan isaga oo Hargeysa jooga oo Cafis weydiisanayq dadka reer Somaliland xiliga Doorashada ka dib”. ayuu yiri Heybe
Waxa uu intaas uu ku daray “ xamar waxa ay noqotay meel xiliga Doorashada loo shaqo tago oo guryo Hargeysa looga dhisto … waxaanse leeyahay qolooyinkaa reer Muqdisho… war Boqor Buurmadoow waa la kireystaa ee lama yeesho.. inta uu idin kireysan yahay ka caana maala… anagana Hargeysa ayaan ku sugaynaaye”.